China Low Voltage Circuit Breaker ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Zhechi Electric
DC အသေးစား ဗို့အားနိမ့် Circuit Breaker၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် လက်ရှိ 63A/125A သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော၊ တိုက်ရိုက်လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဗို့အားသည် 1/2/3/4 ဝင်ရိုးစွန်းအတွက် 250V ဖြစ်သည်။ DC ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် စက်ပစ္စည်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိကအားဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်၊ စာတိုက်၊ အသွားအလာ၊ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဗို့အားသည် တူညီသောထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ IEC60898၊ GB10963 စံနှုန်းအရ ထုတ်ကုန်များ။
Low Voltage Circuit Breaker ၏အင်္ဂါရပ်များ
1. သာမိုပလတ်စတစ်အခွံ၊ အပြည့်ဝင်ပေါက်၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းသတ်ခြင်း။
2. အထူးလုံခြုံစိတ်ချရမှု- လိုင်းချိတ်ဆက်မှု ခိုင်မာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း သေချာစေရန် ဂန္ထဝင် U ဥမင်ဂိတ်။
3. မူလလေစီးကြောင်းသည် ကပ်လျက် circuit breaker အကြား အပူချိန်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်သည်။
4. ဘေးကင်းရေးလက်ကိုင်၊ ဂန္ထဝင်မူရင်းဒီဇိုင်း၊ ergonomic။
ZHECHI သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဆယ်နှစ်ကျော် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအဖွဲ့တွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် လူပေါင်း 100 ကျော် ပါဝင်ပြီး Low Voltage Circuit Breaker အတွက် အသုံးဝင်မှု မော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့် လက်မှတ် 20 ခုနှင့် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် လက်မှတ် 8 ခုကို ရရှိခဲ့သည်။ ZHECHI နည်းပညာအဖွဲ့သည် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ 1 နိုင်ငံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း2ခု၏ စံနှုန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် Low Voltage Circuit Breaker ၏ အပြည့်အဝအကွာအဝေးကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နှင့် ကျန်ရှိသော circuit breakers များမှာလည်း အလွန်ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးစုတ်တံများ၊ Nt50 Mini Safety Circuit Breaker MCB၊ wafer အတွက် သတ္တုလက်စွပ်၊ PP နှင့် နိုင်လွန်နှင့် ဝါယာကြိုးများ၊ ပလပ်စတစ်ပြား စသည်ဖြင့် စုတ်တံအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
Dz47 DC Mini Circuit Breaker စီးရီးကို အလင်းဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် သို့မဟုတ် မော်တာဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တွင် စနစ်အား ဝန်ပိုမှုနှင့် တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
Solar Molded Case Circuit Breaker သည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအရ ZHECHI မှ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော စက်မှုဆားကစ်ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးစုတ်တံများ၊ Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker၊ wafer အတွက် သတ္တုလက်စွပ်၊ PP နှင့် နိုင်လွန်နှင့် ဝါယာကြိုးများ၊ ပလပ်စတစ်ပြား စသည်ဖြင့် စုတ်တံအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
1P 2P 3P 4P DC 250V-1000V 10Solar Mini Circuit Breaker MCB Fuse PV System Solar Engery 3/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125A Solar Photovoltaic System Circuit Breaker။
Zhechi Electric သည် Low Voltage Circuit Breaker ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အထူးပြုထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ Low Voltage Circuit Breaker ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် R&D နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် အမြဲအာရုံစိုက်ထားပြီး လက်တွေ့အကျဆုံး Low Voltage Circuit Breaker ကို ဖန်တီးရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ဤတွင် သင်သည် နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှုနှင့် လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကိုးကားချက်များနှင့် နမူနာများကို အခမဲ့ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ချိုသာသောစျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်း2နှစ် အာမခံ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ In stock လာဝယ်ကြနော်။